Taariikhda My Butros » Hawaii – Booqasho la xayawaankaaga
Hawaii – Booqasho la xayawaankaaga
Last updated: Jan. 16 2020 | 3 min akhri
Hawaii waa State free raabiyada ah halka United States Continental ee ma aha, sidaas aad xayawaan aan la ogolaado Hawaii haddii aysan galay karantiil.
Dejinta Hawaii ayaa ay muhiim u safraya milkiilayaasha xayawaanka beddelay xeerasha si visitors in Islands ay weheliyaan ay xayawaanka keeni kara. Hadda xeerarka khuseeyaan oo keliya in Dogs & Cats.
Xitaa maleeyeen ma waxay u sameeyey si fudud oo waa qaali, haddii aad si fiican u diyaariyaan ay idiin sii daayo doonaa xayawaanka marka ay wadanka garoonka diyaaradaha Honolulu ah.
Tallaabada One – Xoolaha Certificate – Waa inay noqotaa asal ah – Koobiyo No. Cadeyntan waa in lagaaga soo saaray xoolaha aan ka badnayn 14 maalmood ka hor intaadan imaanin ee Hawaii.
Tallaalada: Xayawaanka waa la tallaaley ugu yaraan laba jeer in uu noolyahay ee raabiyada iyo tallaalada kuwa waa in ay noqdaan wax ka badan 90 maalmood marka laga reebo. Haddii tallaalka ahaa liisanka hal sano ka dibna tallaalka ugu dambeeyay ee suuragal ah in la sameeyo oo aan ka badan 12 bilood kahor imaanshiyaha xayawaanka ee Hawaii. Haddii tallaalka ahaa ee liisanka 3-sano ah ka dibna tallaalka ugu dambeeyay ee suuragal ah in la sameeyo oo aan ka badan 18 bilood kahor imaanshiyaha Hawaii. Si kasta ha ahaatee tallaalka ugu dambeeyay ee suuragal ah in la sameeyo wax ka badan 90 maalmood kahor imaanshiyaha Hawaii.
Caddaynta waxaa ka yimid xoolaha waa in taariikhda tallaalka ugu dambeeyey, iyo taariikhda tallaalka hore. Caddaynta waa tilmaamo magaca tallaalka, badan ama lambarka taxan, bareeg xoojin ah, taariikhda tallaalka, taariikhda uu dhacayo iyo in ay ahayd nooca hal ama saddex sano ruqsada.
Caafimaadka Good: Shahaado Waa in xayawaanka waa caafimaad wanaagsan iyo in la daweeyey Shilinta aan ka badnayn 14 maalmood kahor imaanshiyaha Hawaii la Fibronil alaabta ama an wax soo saarka oo qoto dheer u dhiganta. Sheeg on shahaadada taariikhda daaweynta iyo alaabta la isticmaalay.
Talaabada labaad: – Microchip Caddaynta waxaa ka yimid xoolaha waa in aad sheegtid lambarkaaga ee ku kaydsan yahay iyo waa in ay ka kooban yihiin xaqiiqda ah in dhakhtarka wuxuu awood u guul ah laga baarayo jab ah.
Chip waa in uu noqdaa mid ah arrin caadi ah Mareykanka (AVID) ama (Home Mar) nooca. Microchip waa in la nimo ka hor tijaabo dhiig xayawaanka ee.
Talaabada Sadexaad – Baaritaanka Dhiigga Raabiyada OIE-FAVN Waa in aad caddayn ka keento shaybaarka ee la aqoonsan yahay oo muujinaya in natiijada baadhitaanka ay ka weyntahay ama si siman u 0.5IU / ml. Shahaadadu waa in ay muujiyaan tirada xayawaankaaga microchip. Baarista dhiigga waa in loo sameeyaa ma ahan in ka badan 18 bilood oo aan ka yarayn 120 maalmood kahor imaanshiyaha Hawaii.
Your xoolaha waa in laga xayawaankaaga qaado saami dhiig ah oo markab in:
Talaabada Afraad: – Codsiga dir dukumentiyada asalka ah, kuwaas oo – ma koobi ah in:
Xoolaha Karantiinka Branch
Ku soo lifaaq jeeg khasnaji, ama money order in xaddiga $165.00 PET.
Dukumiintiyada iyo jeeg waa in ay yimaadaan 10 maalmood ka hor imaanshada xayawaanka ee. Tan iyo dukumentiyada aan la diyaarin karaa iyadoo aad dhakhtarka ka badan 14 maalmood waa inaad kahor imaanshiyaha waa ku soo dirtay Federaalka Express inay u qalanto in la sii daayo garoonka diyaaradaha ee xayawaanka ah.
Tallaabada shanaad: – Arrival Waxaad gali kartaa oo kaliya Hawaii marayo Honolulu Airport International oo kaliya saacadaha u dhexeeya 8 waxaan ahay iyo 9 pm. Your xayawaanka la qaadi doonaa garoonka xarunta karantiil yaal 99-951 Halawa Valley Road, Aiea, Hawaii 96701 – Telephone 808 483-7151.
Waxaad qaadan doontaa xayawaanka goobta in
Dog Walker ayaa